TÜBİTAK 9 Vachatora Vanoenderera Mberi Vashandi | RayHaber | raillynews
mushaGENERALMabasaTÜBİTAK ichazorodze Vashandi vanoenderera mberi 9
06 / 05 / 2020 Mabasa, GENERAL
Tubitak ichaenderera ichishandira vashandi
TÜBİTAK inotora vashandi 9 vepamberi kuti vashande muKocaeli. Mamwe mamiriro akakosha anodikanwa kune vanonyorera. Zvikumbiro zvinofanira kuitwa muna Chivabvu 27, 17.00:XNUMX nguva pfupi yapfuura. Zvikumbiro hazvigamuchirwi, kunze kwekunge zvikumbiro zvakaitwa kuburikidza ne "Job application System".
DZESHURE DZESVONDO DZOKUTI MUCHISANGWA MUCANDIDATES
a) Kurambidzwa kodzero dzeruzhinji.
b) Pasina kupihwa kodzero yekutora chikamu muhurukuro mukati mehuwandu hwezviziviso zvakaverengekaTTT.BİLGEM.UEKAE.2019-2 uye TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-3.
c) Asina chirwere kana chirwere chinotapukira chinogona kumutadzisa kuita basa rake nguva dzose.
d) Kunze kwekuparara zvisina hanya, mhosva dzakashandurwa mune dzimwe sanctions dzekupfupika mutongo uye dzakadzorerwa zvimwe zvinhu kunze kweizvo zvakanyorwa pazasi; Kunyangwe vakaiswa mujeri kweanopfuura mwedzi mitanhatu kana kukanganwirwa, vakatarisana nekubirwa, hutsotsi, chiokomuhomwe, umbavha, umbavha hwakakwanira kusapihwa mhosva yekupara mhosva kana kunyudza, kutaurwa zvisirizvo kwevateresi uye vanoita zvehumhizha, kuburitsa pachena chakavanzika chebasa, mhosva dzakavanzika dzehurumende. Pasina kuve nhengo, kubatana kana kubatana neiyo chimiro, mafomati kana mapoka ari mukati merudzi rweChisungo Nhamba 667 kana zvigadzirwa, mafomu kana mapoka akasarudzwa neNational Security Council kuita zvinopesana nekuchengetedzwa kwenyika.
e) Vachavhara vanofanira kuve neGradeation Giredhi Avhareji ingangoita 4,00 kubva pa2,50. (Mukutendeuka kwegiredhi point avhareji yevanenge vachivhotera vane yunivhesiti giredhi masisitimu ari mugadziriro ye100 kuenda kuhurongwa hwe4, iyo Mahwendefafura emaGrade ari muhurongwa hwe4 muSystem ye100 achashandiswa).
a) Kunyorera kushambadzirowww.bilgem.tubitak.gov.t ndiye”Iwe unofanirwa kunyoresa kuJobe Kodhi System. (Kana uchigadzira CV yekushandisa, zvinyorwa zvese zvinodikanwa zvinofanirwa kuwedzerwa kune system nenzira yemagetsi uye chikumbiro chinofanirwa kuitwa nekusarudza kodhi yechitupa). Zvikumbiro hazvizogamuchirwe kunze kwekunge zvikumbiro zvakaitwa kuburikidza neJobe Application System.
b) Zvikumbiro hazvifanirwe kuendeswa kwete mushure me27 / 05 / 2020: 17: 00.
c) Zvishandiso zvinozoongororwa kuburikidza neyekushambadzira chiratidzo khodhi. Vachavhara vanozokwanisa kunyora nekusarudza kodhi yeinongedzo kubva kuhurongwa hwekushandisa basa. Zvikumbiro usasarudze kodhi yekodhi hazvizoongororwe.
d) Zvinoenderana nechinyorwa (e) che "General Mamiriro Ekutsvakirwa Vanoda Kukwenyerwa", kagumi nhamba yevashandi vanozotorwa kubva kumhando yepamusoro vachadaidzwa kubvunzurudzwa. Kana paine vamwe vakwikwidzi vane mucherechedzo mumwe chete sewemunyowani wekupedzisira, vachakokwa kuzobvunzurudzwa.
e) Vachavhoterwa vanozoongororwa zvinoenderana nechirevo chavakapinda muchirongwa chekunyorera basa panguva yekunyora kwavo uye kana ruzivo rwacho rwapinda rwusina kana chero runyorwa rwezvinyorwa zvinotevera rashaikwa, chikumbiro chichaonekwa hachishande.
CV iripo (CV yako inofanirwa kugadzirirwa nemifananidzo yemavara, kusanganisira Turkish, Turkish ID nenhamba dzefoni).
Batanidza Degree kana Chitupa Chekubuda.
YÖK Alumni Chitupa (internet kudhindwa ne e-hurumende uye kodhi kodhi).
Gwaro Rekushanda uye Inishuwarenzi Sevhisi Gwaro kubva kune vavhoterwa vane ruzivo.
Gwaro rinoratidza chimiro chemauto.
Ongorora: Zvese zviitiko uye zviziviso zvine chekuita nemaitiro zvinogona kuwanikwa pane webhusaiti yedu Institution (www.bilgem.tubitak.gov.tr ​​/ http://www.tubitak.gov.tr) ichaziviswa.
Shure kweiyo Gün Sayan Sivas Ankara Yekumhanya Yekukurumidza Chitima
ASELSAN Tsigiro kune Modular Yenguva Yekutanga Zones
General Directorate yeCoastal Safety kune Vanochera Vashandi Vese (81 Vashandi)